विकराल बन्दै गरेको स्तन क्यान्सरबाट जोगिन के गर्ने ? कसरी थाहा पाउने ? | Hamro Doctor News
By डा. कपेन्द्र अमात्य, क्यान्सर शल्य चिकित्सक
जीवनशैलीको परिवर्तन तथा खानपानका कारण क्यान्सर रोगको वृद्धि भइरहेको छ । महिलाहरुमा हुने क्यान्सरको कुरा गर्दा पाठेघरको मुखको क्यान्सर पहिलो स्थानमा रहेको छ भने स्तन क्यान्सर दोस्रो स्थानमा छ ।
हाल नेपालमा स्तन क्यान्सर सम्बन्धी जागरुकता बढेको पाइन्छ । विशेषगरी ग्रामिण क्षेत्रमा भन्दा पनि शहरी क्षेत्रका महिलाहरुमा स्तन क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतना बढेको पाइन्छ । तर, अझै पनि अधिकांश महिलाले यसमा अपेक्षा त्यती ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
नेपालमा कुनै आधिकारिक अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क नभएपनि वर्षेनी करिब ५ हजार जनामा स्तन क्यान्सर हुने गरेको पाइन्छ । यकिनका साथ भन्न नसके पनि महिलाहरुमा स्तन क्यान्सर हुने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ । बदलिँदो जीवनशैली, अस्वस्थकर जीवनयापन, बदलिँदो यौन जिवनले यसमा वृद्धि गराइरहेको छ ।
क्यान्सर के कारणले हुन्छ भन्ने हालसम्म पनि थाहा हुन सकेको छैन । तर, यसका केही कारकतत्व हुन सक्छन्, जसले यसको जोखिम बढाउँछ । कारकतत्वलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ ।
क. परिवर्तन गर्न सकिने,
ख. परिवर्तन गर्न नसकिने,
धेरै यस्ता कुराहरु छन् जसलाई ध्यानदिन सकेका स्तन क्यान्सर बाट बच्न सकिन्छ । जस्तै मोटापन घटाउने, धुम्रपान, रक्सीका साथै समयमै बच्चा जन्माउने(३० वर्ष भन्दा पहिला), नियमित स्तनपान गराउनाले स्तन क्यान्सर हुन बाट बच्न सकिन्छ ।
परिवर्तन गर्न नसकिनेमा महिलाको उमेर, महिनावारी छिटो हुने(१२ वर्ष भन्दा पहिला), महिनावारी ५० वर्ष भन्दापछि हुने, वंशाणुगत जस्ता कारणलाई हामी रोक्न सकिँदैन । तर, सजग भएमा यसको छिट्टै न्यूनिकरण भने गर्न सकिन्छ ।
कस्तो महिलालाई क्यान्सर हुने सम्भावना रहन्छ
परिवारमा पहिले स्तन क्यान्सरले भएमा ।
७५ प्रतिशतभन्दा बढी क्यान्सर ५० वर्ष माथिका महिलामा देखिएको छ ।
जुन महिलाको पहिलो महिनावारी १२ वर्ष उमेर भन्दा कम उमेरमा भएमा ।
जुन महिलाले बच्चा जन्माएकी छैनन् ।
जुन महिलाको पहिलो गर्भ ३० वर्षभन्दा माथिको उमेरमा भएमा ।
मोटा महिलामा ।
चुरोट र मदिरापान गर्ने बानी भएका महिलामा ।
नेपालमा कम उमेरमा नै स्तन क्यान्सर देखिन थालेको छ । ४० देखि ५० प्रतिशतलाई ४० देखि ५० वर्षको उमेरमा स्तन क्याक्सर भएको पाइन्छ । त्यसैगरी ३० वर्षको उमेरमा पनि देखिन थालेको छ । जती कम उमेरमा स्तन क्यान्सर हुन्छ त्यती नै यो आक्रामक हुन्छ । त्यसलै स्तन क्यान्सरको परीक्षण ४० वर्ष भन्दा पहिला नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महिलामा स्तन क्यान्सर हुने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ । स्तन क्यान्सर भएनभएको महिला आफैले पनि ऐना हेरेर पत्ता लगाउन पनि सकिन्छ । स्तन क्यान्सर भएमा वा हुने सम्भावना भएमा निम्न लक्षण देखा पर्न सक्छन्
दुबै स्तनको आकारमा परिवर्तन भएमा
दुवै अथवा एकापट्टिको स्तनको रङ परिवर्तन भएमा
स्तनको मुन्टोबाट तरल पदार्थ बगेमा
स्तनको छाला परिवर्तन वा रातो भएमा
स्तन अथवा काखी दुखिरहेका
स्तनमा गाँठागुठी आएमा
स्तनमा डिम्पल परेमा
साथै यी बाहेक स्तनमा कुनै पनि परिवर्तन आएमा चिकित्सकसँग जाँच गराउनु पर्छ । माथि उल्लेखित लक्षणहरु सुरुवाती अवस्थामा देखिने लक्षणहरु हुन् । तर, कतिपय अवस्थामा कुनै लक्षण विना पनि स्तन क्यान्सर देखिन सक्छ । त्यसैले २०÷२५ वर्षदेखि २-३ वर्षमा स्तन जाँच गराउँनु पर्छ । र ४० वर्षभन्दा माथिका दिदी बहिनीहरुले हरेक वर्ष कम्तिमा एकपटक मेमोग्राम गर्दा स्तन क्यान्सरबाट हुने जोखिमबाट बच्न सकिन्छ ।
२० वर्षसम्मको उमेरमा : स्तनको परिवर्तनको लक्षण थाहा पाउन महिनाको एक पटक आफैँले आफ्नो स्तन परीक्षण गर्ने ।
२० देखि ३९ वर्षको उमेरमा : प्रत्येक तीन वर्षमा चिकित्सकद्वारा स्तन परीक्षण गराउने ।
४० देखि ४९ वर्षको उमेरमा : प्रत्येक एक÷दुई वर्षको अन्तरालमा म्यामोग्राफ गर्ने .
स्तन क्यान्सर यस्तो क्यान्सर हो, जती छिटो थाहा पाउन सक्यो उपचार पनि राम्रो हुनुको साथै कम खर्चमा उपचार पनि सम्भव रहन्छ । जती ढिलो थाहा पायो उपचार पनि गाह्रो हुनुको साथै खर्च पनि बढिनै लाग्ने गर्छ ।
सुरुकै अवस्थामा थाहा पाँए ९५ प्रतिशतलाई बचाउन सकिन्छ । त्यसै गरी पहिलो चरणलाई ८५ प्रतिशत, दोस्रो चरणलाई ७५ प्रतिशत, तेस्रो चरणलाई ५० प्रतिशत र चौथो चरणमा प्रवेश गरेकालाई १० देखि १५ प्रतिशतलाई मात्र बचाउँन सकिन्छ । स्तन क्यान्सरबाट बच्नु भनेको जति छिटो यसलाई पत्ता लगाउँनु हो ।
स्तन क्यान्सरको उपचार तीन प्रक्रियाबाट गरिन्छ ।
शल्यक्रियामा पहिलाभन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ । पहिला स्तन पुरै काटिन्थ्यो । जसले गर्दा कुरुप समेत देखिन्थ्यो । तर, हाल स्तन बचाएर क्यान्सर भएको भागमा मात्र शल्यक्रिया गरिन्छ ।
केमोथेरापी पहिलाको तुलनामा धेरै राम्रो भएको छ । पहिला यसको साइड इफेक्ट धेरै रहेको थियो भने अहिले यसको साइड इफेक्ट पनि कम हुन्छ । सबैमा एउटै औषधिको प्रयोग गरिन्थ्यो भने हाल क्यान्सरको अवस्था र प्रकार हरेर फरक फरक औषधिको प्रयोग गरिन्छ ।
नेपालमा पहिलाको तुलनामा रेडियोथेरापीको पनि राम्रो विकास भएको छ । नेपाल क्यान्सर हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टरमा नयाँ रेडियसन मेसिन पनि ल्याइएको छ । जसको प्रयोगबाट धेरै भन्दा धेरै स्तन क्यान्सरबाट बचाउन सकेका छौं । शल्यक्रिया पछि स्तन बचाउँन राम्रो रेडियसन मेसिनको आवश्यकता गर्छ । हामीले शल्यक्रिया गरेका सयमा ५० जनाको स्तन बचाउन सफल भएका छौं ।
एक सेन्टिमिटर भन्दा ठूलो गिर्खाहरुलाई शल्यक्रिया र केमोथेरापी गर्नु पर्छ । यदि गिर्खा काखिमा सरेमा रेडियोथेरापी पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।
स्तन क्यान्सर उपचार पछि अपनाउनु पर्ने कुराहरु
स्तन क्यान्सरको शल्यक्रिया पछि पूर्णरुपमानिको भएमा वा केमोथेरापी गरेकाहरुले खानपिनमा ध्यानदिनुको साथै शल्यक्रिया गरेको तर्फको हातलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । शल्यक्रियामा काखिको गिर्खाहरु निकालिएको हुँदा त्यसमा इन्फेक्सन हुन सक्ने, हात सुन्निने हुन सक्छ । जीवन शैलीलाई परिवर्तन गर्नुको साथै आफ्नो मनोवल बढाउँनु पर्छ ।
(डा. अमात्य नेपाल क्यान्सर हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टरका क्यान्सर शल्य चिकित्सक हुन् ।)
Last modified on 2018-10-16 07:16:08